Jaamacadaha ku yaal Kanada ee u fidiya Caawinta Dhaqaalaha Ardayda Caalamiga ah
Kuwani waa jaamacado ku yaal Kanada oo bixiya gargaar lacageed ardayda caalamiga ah. Kaalmooyinkan ardayda waxay isugu jiraan deeqo waxbarasho, amaahda ardayda, deeqaha waxbarasho ilaa abaalmarinno.
Waxaad waligaa rabtay inaad wax ku barato Kanada laakiin ma xamili kartid culeyska dhaqaale? Ha fiirin mar dambe, maaddaama maqaalkani adiga kuu yahay. Qodobkaan, waxaad ku ogaan doontaa jaamacadaha bixiya kaalmada dhaqaale ee ardayda caalamiga ah.
Gargaarka maaliyadeed wuxuu noqon karaa qaab deeq waxbarasho oo buuxda ama qayb ahaan la maalgeliyo, gunno bille ah oo lagu daboolo kharashyadaada ama lagu iibsado agabyada la xiriira dugsiga. Kaalmooyinkan lacageed ee ardayda caalamiga ah waxaa bixiya jaamacadaha Kanada qaarkood.
Maqaalkan, inta badan kaalmada ardayda ee aan ka hadlay waa deeqo waxbarasho. Waxa kale oo jira dhowr kaalmooyin kale oo ay bixiyaan jaamacadahaani.
Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo dugsi, urur, ama xitaa shaqsi shaqsi ah ayaa sameynaya si ay kaaga caawiyaan yareynta cadaadiska dhaqaale ee waxbarashada ayaa mudan in la qiimeeyo. Marka, haddii kaalmooyinkani ay ku imaanayaan qaab ujrooyinka maktabadda, ajuurada buugaagta, khidmooyinka guryaha ama quudinta, lacagta jeebka, deeqaha waxbarasho ee qayb ahaan ama dhammaystiran; waa u qalantaa
1 Jaamacadaha ku yaal Kanada ee u fidiya Caawinta Dhaqaalaha Ardayda Caalamiga ah
1.1 DIIWAAN-GELINTA SHAQAALAHA EE SHAQAALAHA YORK UNIVERSITY
1.2 JAAMACADDA HOGAAMIYAHA CAALAMIGA AH EE BRITISH COLUMBIA ABAALMARKA Beri.
1.3 JAAMACADDA TORONTO LESTER B. PEARSON SCHOLARSHIP INTERNATIONAL
1.4 HOGAAMIYAHA GUUD EE JAAMACADDA YORK EE SCHOLARSHIP BARI
1.5 JAAMACADDA BRITISH COLUMBIA WEHRUNG INTERNATIONAL ARDE ABAALMAR
1.6 PIERRE ELLIOT TRUDEAU FOUNDATION SCHOLARSHIPS DHAQAALAHA
1.7 UNIVERSITY OF MANITOBA QIIMEYNTA FADHIYADA
1.8 DUGSIYADA GELISTA JAAMACADDA CARLETON
1.9 JAAMACADDA AAD U HELI KARTO MASTAXDA WATERLOO EE SARE
1.10 JAAMACADDA DUGSIYADA MADAXWEYNAHA EE WINNIPEG
Deeqda waxbarasho ee gelitaanka caalamiga ee Jaamacadda York
Abaalmarinta Berrito Hogaamiyaha Caalamiga ee Jaamacadda British Columbia
Jaamacadda Toronto Lester B. Pearson Deeq waxbarasho oo caalami ah
Hogaamiyaha Caalamiga ee Jaamacadda York ee Deeqda Berri
Abaalmarinta Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda British Columbia Wehrung
Deeqda waxbarasho ee gelitaanka Jaamacadda Carleton
Abaalmarinta Sare ee Jaamacadda Waterloo Master
Jaamacadda Winnipeg deeqda waxbarasho
DIIWAAN-GELINTA SHAQAALAHA EE SHAQAALAHA YORK UNIVERSITY
The Jaamacadda York University deeq waxbarasho oo caalami ah waxaa la siiyaa ardayda caalamiga ah inay wax ka bartaan koorso kasta oo ay doortaan Jaamacadda York, Kanada iyada oo lagu saleynayo mudnaanta taas oo macnaheedu yahay arday aad ufiican oo leh waxqabad wanaagsan oo tacliimeed ayaa muujiyey hal-abuurnimo wanaagsan dugsigoodii hore iyada oo loo marayo farshaxanka ama isboortiga waxaana loo aqoonsan yahay hoggaamiyeyaal ka dhex jira dugsigooda iyo bulshada.
Sanduuqa deeqda waxbarasho ayaa u dhigma $ 140,000 oo ardayda codsanaysa waa inay haystaan ​​ogolaansho waxbarasho, inay bilaabaan codsigooda iyagoo weli ku jira dugsiga sare ama aan ka badnayn laba sano dugsiga sare ka dib iyo sidoo kale inayna lahayn daraasado jaamacadeed ama jaamacadeed oo hore.
JAAMACADDA HOGAAMIYAHA CAALAMIGA AH EE BRITISH COLUMBIA ABAALMARKA Beri.
The Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Berrito Hogaamiyaha Caalamiga ee Jaamacadda British Columbia waxaa lagu bixiyaa iyada oo ku saleysan baahida ardayga taas oo macnaheedu yahay inay dabooli doonto khidmadaha waxbarashada iyo kharashyada nolosha ee kuwa ku guuleysta deeqda waxbarasho.
Si aad ugu qalanto abaalmarintan, ardaydu waa inay lahaadaan diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah oo loo oggolaado shahaadada xulashada koowaad ee aad codsanayso.
Ma jiro qaddar caadi ah ee deeqda waxbarasho, waxay u furan tahay dhammaan jinsiyadaha oo waxaad ku baran doontaa koorso kasta oo aad dooratid Jaamacadda British Columbia.
JAAMACADDA TORONTO LESTER B. PEARSON SCHOLARSHIP INTERNATIONAL
The Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Lester B. Pearson waxay u furan tahay ardayda ka socota dhammaan jinsiyadaha inay wax ku bartaan koorso ay doortaan Jaamacadda Toronto, Canada.
Deeqdani waxay siisaa maalgelin buuxda codsadayaasha guuleysta waxaana lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo heer sare tacliimeed iyo aqoonsi hoggaamineed codsadayaashuna waa inay soo xushaan dugsigooda.
HOGAAMIYAHA GUUD EE JAAMACADDA YORK EE SCHOLARSHIP BARI
Tani waa $ 80,000 Hogaamiyaha Caalamiga ah ee Berri deeqda waxbarasho la siiyay ardayda caalamiga ah si ay wax uga bartaan koorso ay doorteen Jaamacadda York.
Si aad u dalbato, waa inaadan haysan wax koolej ama jaamacad ah oo aad horay u soo baratay oo aad codsatid inta aad weli dugsiga sare ku jirto ama ugu badnaan laba sano kadib dugsiga sare.
Deeqdani waxay bartilmaameedsaneysaa ardayda leh diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah, adeegyo hoggaamineed oo si wanaagsan loo aqoonsan yahay labadaba dugsiga iyo bulshadooda kala duwan ama waxay muujiyeen waxqabad aad u wanaagsan xagga farshaxanka ama cayaaraha.
JAAMACADDA BRITISH COLUMBIA WEHRUNG INTERNATIONAL ARDE ABAALMAR
The Abaalmarinta Ardayda ee Jaamacadda British Columbia Wehrung waa deeq waxbarasho oo ku saleysan baahida oo aqoonsan ardayda caalamiga ah ee leh waxqabad tacliimeed heer sare ah kuwaas oo la halgamay malaha sababo dhaqaale awgood, oo ka yimid guri ama gobol dagaal ka dhacay, kana yimid dalal aan horumarsanayn laakiin wali awood u leh inay ku guuleystaan ​​waxqabad tacliin heer sare ah.
PIERRE ELLIOT TRUDEAU FOUNDATION SCHOLARSHIPS DHAQAALAHA
Deeqdani waxay u dhigantaa $ 60,000 waxayna u furan tahay ardayda caalamiga ah ee ka socota adduunka oo dhan si ay u codsadaan barnaamij dhakhaatiirta cilmiga aadanaha iyo sayniska bulshada ku dhowaad dhammaan jaamacadaha ku yaal Kanada.
Tani waa deeq waxbarasho dhakhtar sidaa darteed codsadayaashu waa inay dhammaystireen ugu yaraan barnaamij bachelor iyo masters degree ah.
Waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan Pierre Elliot Trudeau Deeq waxbarasho iyo sida aad ugu qalmi karto.
UNIVERSITY OF MANITOBA QIIMEYNTA FADHIYADA
The Jaamacadda Manitoba Fududeeyaha Xirfadaha waxaa loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee ay tahay inay heleen shahaadada qalin-jabinta waxayna raadinayaan kaalmo dhaqaale si ay u sii wataan waxbarashadooda heerka Doctoral ama Masters ee Jaamacadda Manitoba.
DUGSIYADA GELISTA JAAMACADDA CARLETON
The Deeqda waxbarasho ee gelitaanka Jaamacadda Carleton waxaa la siiyaa ardayda caalamiga ah ee buuxiya shuruudaha gelitaanka celceliska 80% iyo wixii ka sareeya si ay wax uga bartaan Jaamacadda Carleton ee Kanada.
Ka-faa'iideystayaashu waxay ka dooran karaan koorsooyin kala duwan oo ay bixiso jaamacaddu maaddaama deeq-lacageedka la heli karo iyadoon loo eegin barnaamijka daraasadda.
JAAMACADDA AAD U HELI KARTO MASTAXDA WATERLOO EE SARE
The Abaalmarinta Masterka ee Jaamacadda Waterloo waxaa la siiyaa ardayda masters-ka caalamiga ah ee bilaabaya barnaamijka qalin-jabinta ee ku saleysan cilmi-baarista.
Codsadeyaasha la aqbalay waxay heli doonaan $ 2,500 xillikiiba muddo shan bilood ah.
JAAMACADDA DUGSIYADA MADAXWEYNAHA EE WINNIPEG
The Jaamacadda Winnipeg deeqda waxbarasho waxaa sanad walba la siiyaa arday caalami ah oo kaliya inuu wax ka barto Jaamacadda Winnipeg laga bilaabo heerka koowaad ilaa heerka shahaadada dhakhtar.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, codsadayaashu waa inay muujiyaan rabitaan xoog leh oo ay ku bartaan, leeyihiin diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah waana inay sidoo kale hal abuur leeyihiin.
Kuwani hadda waa qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaal Kanada oo bixiya kaalmo dhaqaale ardayda caalamiga ah.
Marka, haddii aad rabto inaad wax ku barato Kanada oo aad raadineyso iskuullo aad suurtogal ka heli karto gacan kaa caawinaysa daboolida kharashka waxbarashada oo dhan, waa inaad fiirisaa dugsiyadan, abaalmarinadooda, deeqaha waxbarasho iyo deeqaha.
Shahaadada Masterka ee Bilaashka ah ee Ardayda
Koorsooyinka Maareynta Mashruuca ee Bilaashka ah ee Shahaadada ah
Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin daabacan
jaamacadaha Canada oo bixiya kaalmo lacageed ardayda caalamiga ahJaamacadaha Kanada oo Siiya Gargaar Maaliyadeed Ardayda Caalamiga ah 2020
Previous Post:10 Jaamacadaha ugu Qaalisan UK ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:13-ka Jaamacadood ee Bilaashka Ah Norway